Nirahina Hitory i Jeremia Mpaminany | Tantara ao Amin’ny Baiboly
Nofidin’i Jehovah ho mpaminany tany Joda i Jeremia, mba hitory amin’ny olona hoe tsy tokony hanao ratsy intsony ry zareo. Hoy anefa i Jeremia: ‘Izaho ange Jehovah mbola kely e! Tsy mahay mitory izany aho!’ Hoy i Jehovah: ‘Aza matahotra. Ao fa hampiako ianao dia hoteneniko anao izay tokony hoteneninao.’
Nasain’i Jehovah nantsoin’i Jeremia ny anti-panahy, dia nopotehiny teo anatrehan-dry zareo ny siny tanimanga kely iray. Dia hoy izy: ‘Hopotehina hoatran’ity i Jerosalema.’ Tezitra be ireo anti-panahy ireo rehefa naheno an’izany. Nikapoka an’i Jeremia koa ny mpisorona anankiray atao hoe Pasora, sady nataony tsy afa-nihetsika ny tanan’i Jeremia sy ny tongony nandritra ny alina. Novahan’i Pasora izy ny ampitso. Dia hoy i Jeremia: ‘Tena tsy zakako izao fa aleoko tsy mitory intsony.’ Rehefa tena nieritreritra anefa izy, dia hoy izy: ‘Toy ny afo ato anatiko ny tenin’i Jehovah, dia tsy maintsy mitory foana aho.’ Lasa indray àry izy nitory.
Olon-kafa indray no lasa mpanjakan’ny Joda tatỳ aoriana. Tsy tian’ny mpisorona sy ny mpaminany sandoka mihitsy tamin’izany ny zavatra notorin’i Jeremia. Hoy ry zareo tamin’ny andriana: ‘Mendrika ny ho faty i Jeremia.’ Dia hoy i Jeremia: ‘Raha mamono an’ahy ianareo, dia mamono olona tsy manan-tsiny. Tenin’i Jehovah ange no toriko e!’ Dia hoy ireo andriana: ‘Tsy tokony hovonoina ho faty izany izy.’
Mbola nitory foana i Jeremia. Tezitra be àry ireo andriana, ka niteny tamin’ny mpanjaka hoe tokony hovonoina izy. Dia navelan’ny mpanjaka hanao izay tiany hatao tamin’i Jeremia ry zareo. Natsipin-dry zareo tao anaty lavaka lalina be feno fotaka àry izy mba ho faty. Nanomboka nilentika tao anatin’ilay fotaka i Jeremia.
Soa ihany fa nisy mpiasan’ny mpanjaka, atao hoe Ebeda-meleka, niteny tamin’ny mpanjaka hoe: ‘Natsipin’ny andriana tao anaty lavaka ange i Jeremia e! Ho faty izy raha avela ao.’ Dia nasain’ny mpanjaka nitondra 30 lahy i Ebeda-meleka mba hisintona an’i Jeremia avy tao. Hita hoe tsy natahotra mihitsy i Jeremia fa nitory foana. Tokony hanao hoatran’azy koa isika e?
“Ho halan’ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Fa izay miaritra hatramin’ny farany no hovonjena.”—Matio 10:22
Fanontaniana: Nahoana i Jeremia no nankatò an’i Jehovah, na dia mbola kely aza? Iza avy no nisakana an’i Jeremia tsy hitory?
Niresaka Momba An’i Jehovah Foana i Jeremia
Nahoana i Jeremia no niresaka momba an’Andriamanitra foana, na dia nananihany sy tezitra taminy aza ny olona?
Jereo hoe inona no nanampy an’i Jeremia hilaza fampitandremana ho an’ny mponin’i Joda.
Sahy Nanao ny Tsara i Baroka
Tsy sahy miresaka ny zavatra inoanao ve ianao? Jereo izay nataon’i Baroka.